Klopp oo ka hadlay dhowr arimood uu qeyb ka yahay Firmino kahor kulanka finalka Champions League – Gool FM
Dajiye May 31, 2019
(Yurub) 31 Maajo 2019.Tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa xaqiijiyay in xiddiga reer Brazil ee Roberto Firmino uu diyaar u yahay ka qeyb qaadashada kulanka habeen dambe ee finalka Champions League ay kula ciyaari doonaan kooxda Tottenham Hotspur.
Kooxaha Liverpool iyo Tottenham Hotspur ayaa habeen dambe ee Sabtida ah ku balansan inay ku wada ciyaaraan garoonka kooxda Atlético Madrid ee Wanda Metropolitano kulanka kama dambeysta ah ee tartanka Champions League.
Haddaba 51 jirkan ayaa kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka kama dambeysta ah ee Champions League, wuuuna ugu horeyn ka hadlay xaalada Roberto Firmino wuxuuna yiri:
“Isagu waa diyaar, haddii aad rabto inaad ogaato shaxda rasmiga ah waxaan kuu sheegi doonaa waqti dambe, balse isagu xaaladiisu aad ayay u fiican tahay”.
Sidoo kale macalinka reer Germany iyo kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa ka jawaabay su’aal ahayd nasiib xumida ka heysata kulamada kama damebysta ah, kaddib markii uu horey ugu soo guuldareystay 6 kulan ee final ah xirfadiisa tababarnimo ee kubadda cagta.
“Uma maleynayo inaan ahay qof nasiib xun xirfadeyda, waxaa jiray dhibaatooyin, mararka qaar waan nasiib badnaa, mararka qaarkoodna ma aanan helin, waxaa lagayaabaa inaysan fiicneyn rikooradeena kulamada kama dambeysta ah”.
“Waxaan ahay bini’aadam hadii aan ku fikiro inaan anigu sabab u ahay wax walba ee igu hareereysan, haddii aan u arko naftayda mid guuldaro ka sameysan, waxaan dhamaanteen la kulmi doonaa dhibaatooyin,
“Waa run inaanan waligeen qayb ka noqonin kuwa nasiibka wanaagsan, laakiin si aad u noqoto mid uu nasiibkiisa fiican yahay, waa inaad shaqeysaa”.
Hordhac: Tottenham vs Liverpool - Wax walba oo ku saabsan kama dambeysta koobka UEFA Champions League.